DPP အာဏာပိုင်များ၏ “ကာကွယ်ဆေးပိတ်ဆို့ခြင်း” အလိမ်အညာနောက်ကွယ်က မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံမှုများ နှင့် တစ်ဖက်သတ် ပြောဆိုမှုများ - Xinhua News Agency
Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးပုလင်းအား ပြသနေစဉ် (BioNTech/Handout via Xinhua)
မကြာသေးခင်က ထိုင်ဝမ် နှင့် တရုတ်ပြည်မကြီးအကြား BioNTech COVID-19 ကာကွယ်ဆေးများ ဝယ်ယူရေး သဘောတူညီချက်တစ်ခု မှာ ထိုင်ဝမ်ကျွန်း၏ ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။သို့သော်လည်း ထိုင်ဝမ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ရေးပါတီ(DPP) အာဏာပိုင်များ နှင့် အချို့သော အနောက်မီဒီယာများက “ ပြည်မကြီး၏ ပိတ်ဆို့မှု” ဟု အမည်တပ်ထားသည့် လိမ်စင်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပုံဖော်နေသည်မှာ လုံးဝအရှက်သိက္ခာမရှိသော လုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး အမှန်စင်စစ် တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်မကြီးသည် မေလတွင် ထိုင်ဝမ်ကျွန်း၌ ကပ်ရောဂါအဆိုးရွားဆုံး ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေချိန်ကတည်းက အကူအညီပေးရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းကို အကြိမ်ကြိမ် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်မကြီးသည် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) က အသိအမှတ်ပြုထားသော ပြည်မကြီးထုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများကို ထောက်ပံ့ပေးမည့်အကြောင်း ကမ်းလှမ်းခဲ့သလို ရှန်ဟိုင်းအခြေစိုက် Fosun Pharma ဆေးဝါးကုမ္ပဏီက ပူးပေါင်းတီထွင်ထားပြီး တရုတ်နိုင်ငံတွင် စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်သည့် BioNTech ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အသုံးပြုမှုတွင် ထိုင်ဝမ်ပြည်သူများကို အားပေးထောက်ခံရန် ကတိပြုခဲ့သည်။
ပြည်မကြီးအနေဖြင့် ၎င်း၏ ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို ထိုင်ဝမ်သို့ စေလွှတ်ပေးနိုင်ရန် ရိုးရိုးသားသား ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ကံအကြောင်းမလှစွာပင် ယင်းစိတ်စေတနာကို ထိုင်ဝမ် DPP အာဏာပိုင်များက အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။
တစ်ဖက်တွင် DPP အာဏာပိုင်များက ထိုင်ဝမ်၏ ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူခြင်း သဘောတူညီချက်ကို ပြည်မကြီးက ပိတ်ဆို့တားဆီးနေကြောင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ကြသည်။အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ ပြည်မကြီးထံမှ ကာကွယ်ဆေးများမယူရန် ထိုင်ဝမ်ပြည်သူများအား ဟန့်တားသည့် အားထုတ်မှုမပြုလုပ်ဘဲ လွှတ်ထားပေးခဲ့သည်။
Fosun Pharma ကုမ္ပဏီသည် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးအလုံးစုံ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် နှင့် တရုတ်နိုင်ငံပြည်မကြီး ၊ ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ၊ မကာအိုအထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နှင့် ထိုင်ဝမ်ဒေသတို့ တွင် ၎င်း၏ mRNA နည်းပညာပလက်ဖောင်းပေါ်ခြေခံ၍ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ်ရန် BioNTech ထံမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း DPP အာဏာပိုင်သည် ဂျာမနီကုမ္ပဏီထံမှ ကာကွယ်ဆေးများဝယ်ယူရာတွင် Fosun ကုမ္ပဏီအားရှောင်လွှဲရန် ကြိုးပမ်းမှုသည် စီးပွားရေးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဟောသိကံဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သို့သော် နိုင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်များအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ထိုင်ဝမ်ကပ်ရောဂါစောင့်ကြည့်ရေးအေဂျင်စီအကြီးအကဲ Chen Shih-chung သည် မကြာသေးခင်က ၎င်း၏ လေသံကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ BioNTech ကာကွယ်ဆေးရောင်းချရန်မှာ ထိုင်ဝမ်သည် Fosun ၏ အလုံးစုံ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း ရှိနေကြောင်း နှင့် သဘောတူညီချက်ကို လေးစားလိုက်နာသင့်ကြောင်း ဆိုခဲ့သည်။
အကယ်၍ DPP အာဏာပိုင်သည် ပြီးခဲ့သောနှစ် အောက်တိုဘာလက နိုင်ငံရေးအရ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု ရပ်တံ့ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ထိုင်ဝမ်လုပ်ငန်းစုများအနေဖြင့် BioNTech ကာကွယ်ဆေး အကြိမ်ရေ သန်း ၃၀ စာ ဖြန်းဖြူးရန် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကာကွယ်ဆေးများ စတင်ထိုးနှံနေပြီးဖြစ်သလို လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကိုလည်း ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် DPP ကိုသာ အပြစ်တင်ရပေမည်။
AstraZeneca ၊ Johnson & Johnson နှင့် Moderna ကဲ့သို့သော WHO က အတည်ပြုထားပြီးဖြစ်သည့် ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားပေါင်းများစွာ ဈေးကွက်တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း DPP သည် အချိန်နှောင်းသွားသည့်တိုင်အောင် ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို တက်ကြွစွာ ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမရှိပေ။“ဟုတ်တာပေါ့” ပြည်မကြီးကို လှည့်ပြီးအပြစ်တင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
၎င်းတို့၏ တစ်ဖက်သတ် တွေးခေါ်မျှော်မြင်မှု အိုင်ဒီယိုလော်ဂျီကိုဆုပ်ကိုင်ထားကာ အချို့သော အနောက်မီဒီယာများက ရှင်းလင်းထင်ရှားတဲ့အမှန်တရားအချက်အလက်များကို မျက်ကွယ်ပြုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း ကပ်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေး ကျရှုံးမှုများသည် အလိမ်အညာဇာတ်လမ်းများကို ဖုံးကွယ်ထားနိုင်မည်မဟုတ်သလို ကောလာဟလများဖြင့် ပြည်သူများကို လှည့်စား၍ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
DPP အာဏာပိုင်အနေဖြင့် ထိုင်ဝမ်ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေး နှင့်
လူ့အသက်များ အလောင်းအစားထပ်ခြင်းကို ချက်ချင်း ရပ်တံ့သင့်ပြီး ထိုင်ဝမ်တစ်အူထုံဆင်းများ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် ကောင်းစွာရှင်သန်နေထိုင်ရေးကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် ခိုင်ခိုင်မာမာ ကြိုးပမ်းအား ထုတ်သွားရမည်ဖြစ်သည်။(Xinhua)
Xinhua Commentary: Slanders and bias behind DPP authority’s “vaccine blocking” lies
BEIJING, July 14 (Xinhua) — A recent deal between Taiwan and mainland firms on purchases of BioNTech COVID-19 vaccines has given hope to the island’s epidemic control.
However, Taiwan’s Democratic Progressive Party (DPP) authority and some Western media portrayed it asamove breaking through the so-called “mainland’s blocking,” completely disregarding the fact that the mainland has expressed willingness to help since the very onset of the island’s serious outbreak in May.
The mainland also showed its sincerity by offering to dispatch epidemic control experts to Taiwan.Unfortunately, the DPP authority repeatedly rejected the goodwill.
On one hand, the DPP authority claimed that the mainland “blocked Taiwan’s deal” of buying vaccines. On the other hand, it spared no effort in obstructing Taiwan people from obtaining vaccines from the mainland.
The irony is that Taiwan’s epidemic monitoring agency chief Chen Shih-chung has recently changed his tone. Chen admitted that Taiwan is within the scope of Fosun’s exclusive rights to sell BioNTech vaccines and the deal deserves due respect.
Yet, it decided to shift the blame on the mainland.Driven by their ideological bias, some Western media have ignored these obvious facts.
The DPP authority should immediately stop gambling on the lives and health of Taiwan people, and make concrete efforts instead to safeguard the health and wellbeing of Taiwan compatriots. Enditem